I-Chalet enhliziyweni ye-Yallingup Forest - I-Airbnb
I-Chalet enhliziyweni ye-Yallingup Forest
Naturaliste, Western Australia, i-Australia
I-indlu yeholidi eyakhiwe ngokhuni ephelele ibungazwe ngu-Jessica
Izindlu zangasese zethu zinamaveranda amakhulu angasese anamaceleni angu-3 ukuze usondele nakakhulu emvelweni futhi akhiwe phakathi kwehlathi elihle lendabuko lale ndawo.
Ngaphakathi kunosofa abantofontofo, umabona kude kanye nesidlali seDVD esiqashwa ngama-DVD atholakala endaweni yethu yokwamukela izivakashi. I-chalet yethu inegumbi lokugezela elilingana kahle, elinamashawa angaphezu kwamabhavu osayizi ogcwele kanye nama-WC ekamelweni elihlukile. Umpheki omncane? Kukhona nekhishi elihlome ngokuphelele futhi. Sithemba ukuthi sicabange ngakho konke ongase ukudinge ngesikhathi uhlala!
Qaphela: Ama-chalet wonke aphethwe ngasese ngakho-ke sicela uqaphele ukuthi ingaphakathi, usayizi kanye nesakhiwo se-chalet yakho kungase kuhluke ezithombeni njengoba kukhona ama-chalet angu-24 atholakalayo endaweni yokungcebeleka ngayinye ehluke kancane. Uma ukhetha i-chalet eseduze ne-pool, indawo ye-bbq, indawo yokudlala kanye nenkundla yethenisi noma uma ukhetha indawo ecashile sicela ucele ngesikhathi sokubhuka.
Ngesikhathi sokuhlala kwakho ungajabulela izinsiza eziningi nemisebenzi. Kukhona ichibi lokubhukuda, inkundla yethenisi, i-trampoline elingana ne-Springfree, ama-'funky monkey', inkundla yokudlala yezingane ene-cubby, nezindawo zokosa inyama.
Gxila endaweni emizileni yokuhamba - uzoqiniseka ukuthi uzobona impilo yezinyoni eningi, izilwane zasendle noma izimbali zasendle ezihlala endaweni.
Izindlela zasehlathini ezihlanganisa i-cape-to-cape track zingatholakala eduze - uma ungumuntu othanda ukuhamba ungajabulela uhambo olungamakhilomitha angu-4 ukusuka e-Resort ukuya olwandle olumangalisayo lwase-Yallingup.
4.69 out of 5 stars from 263 reviews
4.69 · 263 okushiwo abanye
Wonke ama-chalets anovulandi omkhulu wangasese ogoqelwe ukuze usondele nakakhulu emvelweni njengoba zonke izindlwana zethu zangasese zitholakala phakathi kwezindawo ezinhle zamahlathi - zibonele wena ama-galah anobungane nama-cheeky kookaburras azokuza azokuhlola!
Ukuthi nihamba njengombhangqwana, umndeni noma njengeqembu labantu abangafika kwabayi-10, ukuhlala kwakho kunoma iyiphi yama-chalets angu-24 bekungeke kube lula.
Ilineni namathawula kunikezwa - kukushiya isikhathi sokuphumula nokuhlala kwakho kujabulise kakhudlwana.
Izindlu zangasese ezibanzi futhi ezinethezekile zesitayela samakoloni ziphethwe ngazinye futhi zifakwe ngendlela ehlukile kumazinga amnandi e-Yallingup Forest Resort.
Wonke ama-chalets anosofa abathokomele, omabonakude besikrini esiyisicaba kanye nezidlali ze-DVD - indawo yokuqasha yama-DVD yosizo iyatholakala endaweni yokwamukela izivakashi.
Ama-Chalets anezindlu zokugezela ezinosayizi omuhle, anamashawa angaphezu kwamabhavu osayizi ogcwele kanye nama-WC ekamelweni elihlukile. Aqukethe usayizi ogcwele, amakhishi ahlome ngokuphelele - sithemba ukuthi sicabange ngakho konke ongase ukudinge ngesikhathi uhlala.
Izifudumezi zegesi, kanye nezifudumezi eziphathekayo ezigcwaliswe uwoyela zikugcina upholile ebusika - kuyilapho abalandeli bakasilingi kuwo wonke amagumbi begcina izinga lokushisa elihle ehlobo.
Iningi lama-chalet ethu angama-duplex amabili okulala. Iningi linombhede owodwa olingana nendlovukazi, amawele amabili kanye ne-fold-out. Kukhona abambalwa abanamakhosikazi amabili - sicela usazise uma unenketho oyikhethayo.
Igumbi lokulala elilodwa, amathathu, amane namahlanu ayatholakala futhi.
Inketho yokulala emane ipholile - yenziwe ngamakamelo amabili okulala axhumene - indlu ngayinye izimele ngokuphelele futhi ithokozela uvulandi wayo. Imindeni eyandisiwe kanye namaqembu amakhulu angase afise ukuvula iminyango exhumayo ukuze kwakheke indawo enkulu enamakamelo amane enamakhishi amabili, amagumbi okugeza amabili kanye namakamelo okuphumula amabili. (Izihambeli eziningi zisitshela ukuthi ukuba nezingane phansi komunye umkhawulo we-chalet kanye nabantu abadala kwenye kusihlwa kusebenza kahle!)
I-Reception ivulwa nsuku zonke kusukela ngo-9am-10:30am futhi kusukela ngo-2pm-5pm
Hlola ezinye izinketho ezise- Naturaliste namaphethelo